I-amazon kindle fire hack ivumela ukufaka iiapp zikaGoogle, i-nook tablet inokufumana i-amazon appstore
Eyona Iindaba Kunye Nohlolo I-Amazon Kindle Fire hack ivumela ukufaka usetyenziso lukaGoogle, iNook yeCwecwe inokufumana iAmazon Appstore
I-Amazon Kindle Fire hack ivumela ukufaka usetyenziso lukaGoogle, iNook yeCwecwe inokufumana iAmazon Appstore
IAmazon Kindle Fire isothuse ngexabiso layo leedola ezingama-199- ngapha koko, ezo & apos zingaphezulu kabini kunamaxabiso aphantsi kune-iPad, kodwa ngexabiso eliphantsi wena & apos; d kufuneka ulalanise. Uhlobo loMlilo lubonisa iprosesa esembindini, kodwa isenokungalingani nomdyarho othile, kodwa yintoni enokuba yingxaki kwabanye -ayinazo ii -apps ezingundoqonjenge-AndroidIntengisongamakhulu amawaka eeapps, kunyeIndawo kaGoogle & apos; szezicelo kubandakanya iGmail, iimephu, iYouTube, iNtetho kunye neeNcwadi phakathi kwezinye.
Kodwa emva kwayo yonke into, uMlilo oSebenzayo uyasebenza kwi-Android 2.3 ye-Gingerbread, nangona inguhlobo olunolusu kakhulu, ke kufanelekile ukuqhuba usetyenziso. Kwaye iyakwenza-wena kunye neapos kuyakufuneka uchithe ixesha ukothula izixhobo kwaye ulandele iziphumo zesifundo esoyikekayo esithunyelwe kuBaphuhlisi beXDA kwaye sinxulunyaniswe ngezantsi.
Nangona kunjalo, kufanele kuqatshelwe ukubaIvidiyo yeAmazonUkusasaza akusayi kusebenza kubasebenzisi abendele. Ukulungiselela le nto, unokukhupha unroot isixhobo ngeapp enjengeSuperOneClick.
Esinye isixhobo esiza kuthi sifumane amanqaku entengiso zizigidi ezingama-249 zeBarnes kunye neNoble yeThebhulethi yeNook ejongeka ngathi iyafana noMlilo woMlilo, kodwa igcina uyilo lwesiginitsha yaziswa ngombala weNook. Ithebhulethi inokusebenzisa inyusa kwisebe losetyenziso kunye nento yokuqala onokuyenza kukongezaIvenkile yeAmazon kunye neeaposkuyo. Oku kunokufezekiswa ngokuvumela imithombo engaziwayo kuseto kwaye ukhuphele iApple App .oreapk yefayile kwaye uyiqhube.
Ngokuqinisekileyo oku kuyakuguqula indlela ezi pilisi zibonwa ngayo ikakhulu njengefestile yangaphambili kwikhathalogu enje ngeAmazon & apos; okanye iincwadi eBarnes naseNoble. Kwaye ngexabiso elisezantsi, oku kunganciphisa izikali ngokuthanda komnye waba babini. Ngaba ufumana enye yezi slates zifikelelekayo?
umthombo: Abaphuhlisi beXDA , Phandroid nge Androidandme
RIP, iTouchWiz! Phila ixesha elide ngamava eSamsung
Ungajongana njani okwethutyana nescreen digitizer (Android)
Iingcebiso ze-AirPods Pro kunye namaqhinga
Kutheni i-XS yentsimbi engenasici ingcono kunayo nayiphi na ifowuni yealuminium?